Uphando lweeHashtags kunye neNkonzo yokuSebenzisa iProfayili
Thenga Abalandeli be-Instagram ngokuzenzekelayo
Thenga ukubuka kwevidiyo ye-Facebook
Thenga Facebook Abalandeli
Thenga iFanekiso yeeFacebook zoKhetho lweFacebook
Eyona ndlela ibalaseleyo yokufumana abalandeli baka-Instagram abaKhulu kunye nokuBathanda!
I-TurboMedia.io sisisombululo sakho esilula nesisebenzayo sokufumana ngokukhawuleza kunye nabalandeli be-Instagram ekumgangatho ophezulu kunye nokuthandayo! Iinketho ezigqwesileyo zasimahla kunye ezihlawulelwayo ziyafumaneka ukuze zilungele iimfuno zakho zokukhula komntu ngamnye.
Fumana abalandeli be-Instagram kunye neeMidlalo zaMahala
Ukufumana abalandeli baka-Instagram Abasimahla kunye nokuBathanda kulula!
Landela imiyalelo elula
Yenziwe kwimizuzwana engama-30 ukuya kwengama-60!
Kutheni usebenzisa iTurboMedia.io?
I-TurboMedia.io ibonelela ngothungelwano oluyilayo olukuvumela ukuba ufumane ngokukhawuleza nangokulula Abalandeli abayi-10 basimahla be-Instagram kwaye I-10 mahala ii-Instagram Likes rhoqo iiyure ezingama-48! Izicwangciso ezihlawulwayo ziyafumaneka, kodwa izicwangciso ezikhululekileyo zisasebenza kakhulu ekukhuleni iprofayili yakho. Akukho phasiwedi iyimfuneko, ukugcina ulwazi lwakho lweprofayile lwe-Instagram lukhuselekile kwaye lukhuselekile.
I-TurboMedia.io yenzelwe ukuba ibe lula njengoko kunokwenzeka ebantwini! Ixesha lakho libalulekile kwaye siyayiqonda loo nto. Ukufumana abalandeli basimahla kunye nezinto ezikuthandayo, gqibezela uvavanyo okanye iintshukumo ezi-5 zentlalo kwimizuzwana engama-30 ukuya kwengama-60 kwaye uyenzile! Uya kuyifumana kwangoko inkonzo oyisebenzisileyo kwaye ungayiphinda inkqubo qho kwiiyure ezingama-48.
Xa uvula isicwangciso simahla okanye sihlawulelwayo, uya kubona abalandeli bakho kunye nezinto ezikuthandayo ziqala ukwanda kwangoko. Yenza i-intanethi isicwangciso samahhala rhoqo emva kweeyure ezingama-48 okanye usebenze nge-100% isicwangciso esihlawulelweyo. Sebenzisa isicwangciso esihlawulelweyo kwaye ngokuzenzekelayo ufumane abalandeli veki nganye kunye nezinto ezithandayo kuyo yonke iposi entsha oyenzayo ngaphakathi kwemizuzu!
Izinketho zasimahla kunye ezihlawulelwayo
Abalandeli abayi-15 ($ 20.00) Abalandeli abayi-30 ($ 40.00) Abalandeli abayi-60 ($ 80.00)
Zuza abalandeli abali-15 Ngosuku
Ukuhlangula qho kwiiyure ezingama-48
Uvula i-1x qho kwiiyure ezili-48
Ukuthandwa okungama-25 ($ 20) Ukuthandwa okungama-50 ($ 40) Ukuthandwa okungama-100 ($ 80) Ukuthandwa okungama-200 ($ 160) Ukuthandwa okungama-500 ($ 350) Ukuthandwa okungama-1000 ($ 700)
Fumana i-25 Likes ngePosi
Fumana abaFundi beSimahla be-Instagram: Funda ukuba yeyiphi into ekubonelela ngayo
NgoJanuwari 2020, Instagram waxela phantse isigidigidi sabasebenzisi benyanga. Yiza ngoJanuwari 2021, elo nani liza kunyuka liye kwiinotshi ezininzi kwaye oku kunyuka ngokukhawuleza kwabasebenzisi be-Instagram kuya kubonisa kuphela ukuba iqonga lifikile kangakanani. Namhlanje, i-Instagram ngumatshini ophambili wokwenza imali kumashishini nakwimpembelelo yemidiya yoluntu, yiyo loo nto ingaphezulu kweqonga leendaba ezentlalo. Kwelinye icala, yinto yokusebenza kwabaninzi. Olona hlobo lwempembelelo kunye nabaphembeleli kwimithombo yeendaba zentlalo benza izigidi ngeposi, kutheni ke kufuneka ushiye ngasemva? Ngaphambi kokuba uqale ukwenza imali yokwenyani evela kwi-Instagram, kuya kufuneka usebenze nzima ukukhulisa umfanekiso wakho eqongeni. Kukho izinto ezimbalwa ezinyanzela ukuba ukhawuleze kangakanani kwaye wenza malini nge-Instagram. Oku kubandakanya ukuba ungubani, amaxabiso uphawu lwakho olumeleyo, into ekufuneka uyibonisile, kwaye bangaphi abantu abakuthembayo kwaye baphendukele kuwe kwizisombululo. Ukuseka isazisi sophawu lwakho kunye nokuqinisekisa umgangatho weemveliso kunye / okanye iinkonzo luxanduva lwakho oluphambili. Kodwa, kukho iindlela zokunyusa ngokukhawuleza inani labalandeli bakho. Izinketho zokufumana abalandeli be-Instagram simahla kunye nezinye iindlela ezihlawulelweyo zinokukunika umda ngaphezulu kwabakhuphisana nabo. Oku ngakumbi ngokubhekisele ekufikeleleni kwabo ujolise kubo kunye nokwenza umbono ongapheliyo. Kule posi, siza kujonga ngakumbi ukuba nokuba nabalandeli abaninzi be-Insta banokukusebenzela njani. Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, masingene ngqo kuyo!
Izibonelelo zokuba nabalandeli abaninzi kwi-Instagram
Kwi-Instagram, iinzame ziindlela kunye nemali sisiphelo. Nangona kunjalo, uya kufika apho xa unabalandeli abaninzi be-Instagram. Nazi izibonelelo ezimangalisayo oza kuqala ukuzibona xa inani labalandeli bakho liqhubeka nokunyuka ngokungaguquguqukiyo.
Abathathi-nxaxheba abaninzi bemveliso yakho: Into omele unikeze ngayo ayizukuvelisa kakhulu i-buzz ngaphandle kokuba ifikelele kubantu abaninzi phakathi kwabaphulaphuli bakho. Ngabalandeli abaninzi, uya kuba nomthamo ongaguqukiyo, okhulayo wabantu abangazukwabelana kuphela ngomxholo wakho kodwa bathenge neemveliso zakho ngokunjalo. Ezinye ze-Instagram niches ezinenzuzo kakhulu ziquka ukuhamba kunye nokhenketho, ubuhle, impilo kunye nokufaneleka, imfashini, umzali, indlela yokuphila, ishishini, ukutya, ukufota kunye nomculo.Thatha uJane Selter umzekelo. Ngabalandeli be-Instagram abangaphezu kwezigidi ezili-12, imodeli yokomelela ibiyeyona nto idumileyo kwi-Instagram yokukhuthaza umthambo, impilo, kunye nokuba sempilweni xa iyonke. UJane ungumzekelo ogqibeleleyo womntu onomdla ngento ethile (kwimeko yakhe, ukomelela). Ukwasebenzisa ixesha lakhe ukwabelana nabantu abanengqondo efanayo kwihlabathi liphela. Kunzima ukucinga ukuba enye yeemodeli zokuqina komzimba ezidumileyo kwi-Instagram yakha yaxhatshazwa ngokusekwe kwinkangeleko.Namhlanje, uSelter urhola kamnandi kwiinkqubo zakhe zempilo ezihlawulelwayo nakwi-Instagram, apho athe gqolo ukongeza kubalandeli bakhe suku ngalunye.
Unokufaka kwiphepha lokuphonononga le-Insta: Xa uzenzele igama kwi-niche yakho kwaye ube nokulandela okundilisekileyo okwaneleyo, iposti yakho inokuvela kwiphepha le-Instagram lokuHlola. Sisebenzisa igama elithi 'endilisekileyo-kwaneleyo' kuba akukho mgaqo unzima kwaye ukhawulezayo malunga nokuba bangaphi abalandeli ekufuneka ubabonakalisile ku-Instagram Phonononga. Iphepha le-Instagram lokuphonononga lalungiswa kwakhona ngoMeyi ka-2019 kwaye ngoku, libonisa ibha yokukhangela evumela abasebenzisi ukuba bakhethe uhlobo lomxholo abafuna ukuwujonga. Okukhethwa kukho kubandakanya i-IGTV, eyiqonga le-Insta lokubukela iividiyo ezinde (umzuzu omnye-kunye neevidiyo), kunye neThenga - iqonga lokuthenga le-Instagram.Ecaleni kwe-IGTV kunye ne-Shop, abasebenzisi banokukhetha imijelo yesihloko ukujonga umxholo niches abanomdla kuzo. Umzekelo, ukuba i-akhawunti yakho ye-Instagram imalunga nokutya, unokuboniswa kwiphepha le-Jonga lomsebenzisi okhangela umxholo onxulumene nokutya. Ukuboniswa kwi-Instagram Explore kunokwenza ukuba isitishi sakho sidityaniswe nabasebenzisi ekusenokwenzeka ukuba abazange bazi nokuba ukho kwaye kufuneka unikeze ntoni.I-Instagram ngoku ivumela iibrendi ukuba zithenge iintengiso kuHlola. Ngelixa iintengiso ezithengiweyo zingaboniswa kwi-Explore feed ngokwayo, zingaqhubela phambili amathuba okuba ibhrendi yakho ifunyanwe.
Yandisa ukugcwala kwewebhusayithi: Ukuba uphawu lwakho lusebenza ikakhulu kwiwebhusayithi yalo esemthethweni, kuya kufuneka usebenzise i-Instagram njengeqonga lokuthengisa iwebhusayithi yakho. Uya kufumana iibhlog ezininzi kunye namanqaku kwi-intanethi acebisa ukuba uthathe amanyathelo ambalwa alula. Oku kubandakanya ukongeza ikhonkco kwiwebhusayithi yeshishini lakho kwi-Instagram bio yakho nakuyo yonke imifanekiso yakho ethunyelweyo kunye neevidiyo. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba unabalandeli abaneleyo, awukwazi ukulindela ukuba i-Instagram ibe liqonga lokudibanisa iwebhusayithi yakho kunye nabaphulaphuli ojoliswe kubo.Ukuba usokola ukufumana abalandeli abatsha nangona uhlala uthumela umxholo okumgangatho ophezulu kwi-Instagram, lixesha ukubhalisela inkonzo ekuvumela ukuba ufumane abalandeli be-Instagram basimahla. Njengoko inani labalandeli bakho liya kunyuka, ngokunjalo nenani leendwendwe kwiwebhusayithi esemthethweni yebhrendi yakho.Ngelixa ukwanda kwetrafikhi yewebhusayithi akuqinisekisi ukuba abantu baya kuthenga oko ukuthengisayo, kuya kunika iwebhusayithi yakho ukubonakala okufunekayo kakhulu. Ukuba wenza imizamo eyaneleyo yokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho i-injini yokukhangela iphuculwe ngokubandakanya amagama angundoqo afanelekileyo kulo lonke, iziphumo ezidibeneyo zinokuba zihle. Isikhundla se-injini yokukhangela yewebhusayithi yakho siya kuphucuka, senze uphawu lwakho lubonakale ngakumbi kungekuphela nje kwi-Instagram, kodwa nakwiqonga elinjengeGoogle, Yahoo, kunye neBing.
Fumana ingqalelo engakumbi kuYouTube: IYouTube lelona qonga likhulu lehlabathi esekwe kwimidiya yoluntu kwaye ukuba ungumntu onomdla kuYouTube, awunakwenza into yakho kuYouTube. Gcina iprofayile ye-Instagram kunye kwaye ukhumbule ukuyisebenzisa ngokukhutheleyo. Kanye njengoko ubuya kwenza kwiwebhusayithi, ncamathisela ikhonkco lejelo lakho likaYouTube kwi-bio yakho ye-Insta kwaye uqhubeke uhlaziya ikhonkco kwividiyo yakho yeYouTube esandula ukuthunyelwa. Phakathi kwabalandeli bakho abadibeneyo kunye nababhalisile kwiYouTube kunye ne-Instagram, kunokuba baninzi yaziswa kuwe ku-Instagram. Ukubandakanya iinkcukacha zeevidiyo zakho zeYouTube kunye netshaneli kwi-Instagram bio yakho iya kubakhuthaza abalandeli be-Instagram abakhoyo ukuba baye kwijelo lakho leYouTube. Ukuba bayayithanda into abayibonayo, uya kuba nababhalisi abaninzi kunye nokujonga kuYouTube, okuya konyusa kakhulu amathuba akho okuba nguYouTuber osisigxina. Ukuba unokuthatha inyathelo kuwo omabini amaqonga, kuya kunika umvuzo ongakumbi. Khawufane ucinge ukufumana imali esempilweni kuzo zombini iYouTube kunye ne-Instagram. Izandi zimema, akunjalo?
Sebenzisana namanye amabhrendi kwaye uvune umvuzo: Xa uqala ukufumana ukubonakala kwi-Instagram, ezinye iimpawu kunye nabadali bomxholo abasebenza kwi-niche yakho baya kufuna ukusebenzisana nawe. Kwezi ntsuku, kuninzi malunga nentsebenziswano kwaye kuncinci malunga nokhuphiswano kwimidiya yoluntu, kwaye iyasebenza. Kunceda ntoni ukubeka omnye umntu phantsi xa amashishini amabini/abantu ngabanye benokusebenza kunye kwaye bondlane ngempumelelo kunye nempumelelo yomnye nomnye? Sibona ii-vloggers zokuhamba zisebenzisana nabanye abahamba nge-vloggers, kunye neemvumi, kunye namagcisa asebenzisanayo. Alithandabuzeki elokuba i-Instagram ivule iingcango ezininzi zamathuba. Kuya kufuneka uphakamise umdlalo wakho kwaye ugxininise ekukhupheni umxholo otsalela ingqalelo kubaphulaphuli ojolise kubo. Nje ukuba ube nesixa esifanelekileyo sabalandeli, ungaya kwezinye iibhrendi zentsebenziswano.Ngelixa zonke izicelo zakho zentsebenziswano zingayi kwamkelwa, ezinye ziya kudlula kwaye ukuba zitsalwe kakuhle, zinokutyhala ukubala kwakho kwabalandeli phezulu. Xa ufikelela kwinqanaba 'lokuchaphazeleka kweendaba zoluntu', unokulindela izicelo zentsebenziswano ezivela kwezinye iibrendi kunye nabadali bomxholo, kwaye umjikelo uya kuqhubeka.Njengomgqugquzeli, uya kuba namandla okusebenzisana neempawu ezivela kwezinye iindawo ezibonelela ngeemveliso zihambelana niche yakho. Umzekelo, ukuba uyimvumi kwaye ukwazi ukufikelela kwimo 'yempembelelo' kwi-Instagram, ungaya kwiibrendi ezenza kwaye zithengise iimveliso ozidlalayo. Umdlali wegitala unokusebenzisana negitare kunye / okanye umenzi we-amplifier, i-vocalist inokusebenzisana nenkampani yokuvelisa imakrofoni, njalo njalo.
Iimpawu ze-Instagram zokwazisa uphawu lwakho
Nje ukuba iphepha lakho le-Instagram liqale ukuqaphela kwaye ufumane abalandeli abaninzi, ungasebenzisa ithuba lokuthengisa okhethekileyo kwi-Instagram ukufumana abalandeli abaninzi be-Instagram. Ngelixa ukusebenzisa zonke ezi zinto kunganyanzelekanga, zive ukhululekile ukudibanisa kunye nokudibanisa. Ngale ndlela, unokwenza uninzi lwezixhobo ezakhelweyo ze-Insta zokwandisa ukufikelela kuhlobo lwakho. Ngaphandle kweempawu zokwabelana ngesithombe rhoqo, i-Instagram iyaqhayisa ngezi zinto zilandelayo zentengiso.
Sixoxe nge-IGTV ngaphambili, kodwa loo nto yiplatifomu yevidiyo emide. Inkqubo emiselweyo ye-Instagram ivumela kuphela iifom zevidiyo ezimfutshane. Ngaphandle kwento yokulayisha ividiyo emfutshane kwifom emfutshane, ezinye izinto ezimbini zevidiyo ezinikezelwa liqonga zibandakanya iividiyo kunye namabali aphilayo. Inqaku levidiyo ebukhoma livumela ii-brand ukuba zakhe ubunyani begama kunye nokungafihli - izinto ezixabisa ngakumbi usuku ngalunye oludlulayo. Oku kungenxa yokhuphiswano oluya lusanda ngokwanda kuwo onke ama-niches. Yindlela entle yokuba abalandeli bakho banxibelelane nawe ngexesha lenene ngokunjalo. Ngalo lonke ixesha uqala ukusasaza ividiyo ebukhoma, abalandeli bakho bayaziswa. Iqonga kutshanje liphucule amandla alo evidiyo kwaye ngoku, abasebenzisi ababini banokubonisa ividiyo ebonakalayo kwizixhobo ezibini ezahlukeneyo. Ukusuka kudliwanondlebe olubukhoma ukuze uphehlelise imveliso ukuya kwintsebenzo yexesha lokwenyani, amathuba anokuphela. Ukuba ialgorithm ye-Instagram iyathandeka kuwe, ividiyo yakho ebukhoma inokuyenza nakwividiyo "eziPhambili ngokuPhila" kwiphepha lokuHlola i-Instagram. Ukuba iyayenza, ividiyo yakho inokujongwa ngabasebenzisi be-Insta kwihlabathi liphela, iphucula kakhulu amathuba okunyuka kwabalandeli. Kukwakhona into 'yamabali' evumela ukubonwa kwemifanekiso yesibini-yesibini kunye nokubukela ividiyo yesibini-yesibini. Yinto entle esetyenziswe kakhulu ziimpawu kunye nabashukumisayo ukuba bahlaziye abalandeli babo ngokubhekisele kwiimveliso zabo zamva nje, iinkonzo, kunye / okanye umxholo othunyelweyo. I-Instagram ikwenzile ukumakishwa kwemveliso ngaphakathi kwento 'yamabali' nayo, oko kuthetha ukuba ubonakalisa imveliso oyithengisayo kwelinye 'leeNdaba' zakho, ungayithegi. Abalandeli abanomdla wokuyithenga banokucofa kwithegi yemveliso kwaye bayithenge kwiwebhusayithi yakho.
Ngaphandle kokwabelana ngeefoto kunye neevidiyo, ungathumela iintengiso ukukhuthaza izinto onokuthi uzinike i-Instagram. Kukho useto olwahlukeneyo onokulilinga ngalo ukufumana uhlobo olufanelekileyo lweentengiso oza kuzenzela uphawu lwakho. Unokusebenzisa umxholo okhoyo kwiphepha lakho kwaye uwaguqulele kwiintengiso kunye nenqaku leNtengiso ye-Instagram. Ukwenza kunye nokulawula iintengiso kwi-Instagram, kuya kufuneka usebenzise Umphathi wentengiso ka-Facebook njengoko i-Instagram sisixhobo esiku-Facebook.
Abasebenzisi be-Instagram banokwenza izaziso zokutyhala, ezinokuthi zibazise xa amaphepha abawalandelayo belayisha iifoto ezintsha, iividiyo, njl. Ukuze usebenzise eli nqaku, kufuneka ukhuthaze abalandeli bakho abakhoyo ukuba bathathe inyathelo. Kuzo zonke iiposti zakho, kubandakanya ukubizela isenzo, uxelele abalandeli bakho ukuba benze izaziso zokutyhala kwisitishi sakho. Ngelixa bonke abalandeli bakho bengazukuphendula kwiifowuni zakho, abanye baya kuyenza. Ukuba bayayithanda into oyiposileyo, baya kwabelana ngayo nabahlobo babo kunye nabalandeli. Izaziso zokutyhala zisenokungabi yeyona nto ubheja ngayo ngokufumana ukubonakala ngakumbi kwi-Instagram, kodwa kunokuba luncedo. isiphelo Ke, ngoku uyazi ukuba abalandeli be-Instagram banokukunceda njani kunye nezinye zeempawu zentengiso ze-Insta. Emva koko, kuya kufuneka uthathe isigqibo malunga nendlela ofuna ukuya ngayo malunga nokufumana abalandeli abaninzi. Ewe, ngazo zonke iindlela, ungathatha indlela yendalo kwaye ulinde abantu ukuba bazibandakanye nomxholo wakho ngaphambi kokubetha iqhosha elithi 'Landela'. Nangona kunjalo, kuthatha ixesha kwaye ukuba ufuna ukukala ubude bempumelelo ye-Instagram, ungangcono ekukhetheni enye indlela. Ngokutyikitya iinkqubo ezonyusa ukubonakala kwe-Instagram ngokukhawuleza, unokufumana abalandeli be-Instagram simahla kunye nokuthanda ngokukhawuleza. Iinkqubo zihlawule iinguqu ekuboneleleni nazo. Ngelixa abo bahlawulelweyo baya kukuzisela iziphumo ngokukhawuleza, ungafezekisa okuninzi ngokusebenzisa iinguqulelo zasimahla ngokunjalo. Elona candelo lilungileyo malunga neenkqubo ezinjalo kukuba akukho zibhoti zibandakanyekayo. Ke, bonke abalandeli abatsha obafumanayo ngabasebenzisi bokwenyani be-Instagram. Ke kutheni ungabhaliseli inkqubo enjalo kwaye uvumele uphawu lwakho lube nefuthe elikhulu kunangaphambili kunangaphambili?
Ngokuzinikela Ngokuzisebenzela 500,000+ Abasebenzisi be-Instagram
Jonga uphononongo lomsebenzisi weTurboMedia kunye namava abo
I-TurboMedia isungule iphepha lethu le-Instagram ngokukhawuleza kunaye nabani na!
Babonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni eziphezulu kwi-Intanethi.
@ yonke imihla
Sele ndisebenzisa i-TurboMedia iminyaka emi-2 kwaye ndafumana ukukhula okungaphezulu kunokuba ndandihlawulele! Enkosi bafo.
12th Meyi 2022
Ukusebenzisa iividiyo zeTikTok zamabali e-Instagram kunye neeReels: uyenza njani
I-TikTok ithathwa njengenye yezona zinto zidumileyo kwiividiyo ezimfutshane emhlabeni namhlanje. I-app yokwabelana ngevidiyo kuthiwa isetyenziswa...
3rd Meyi 2022
Kutheni Ukunciphisa Uluhlu Lwakho "olulandelayo" lukunceda ukuba utsale abalandeli abaninzi?
Nokuba ivakala ngathi iyaphikisana, unokufumana abalandeli abaninzi be-Instagram ngokungalandeli kwi-Instagram abo ungasanxibelelani nabo. Ngokudibana, senza...
Ezona zihluzo zeefoto onokuthi uzisebenzise kwiNtengiso yakho ye-Instagram ngo-2022
I-Instagram ayiseyiyo i-app elula yokwabelana ngefoto eyayikade iyiyo. Udumo lwayo olukhulu kwihlabathi liphela luyenze yayinto engenakuthelekiswa...
Ngaba sowulungele umphumo wentsholongwane?
I-TurboMedia yesicombululo seNtengiso seNtengiso yeNtlalontle yeshishini kunye neeakhawunti ze-Instagram. Sinceda abathengi bethu bafumane abalandeli abaninzi, ukuthandwa, ukujonga kunye nezimvo ukukonyusa ifuthe labo kwi-Intanethi.
Ilungelo lokushicilela © 2022 TurboMedia (turbomedia.io). Onke Amalungelo Agciniwe. Sitemap
Uyisebenzisa njani i-Instagram yeNkxaso yezeNtlalo
Ukuba nguMphembeleli oNxulumanayo kunokukunceda njani ukuba ukhulise iakhawunti yakho ye-Instagram
Ilungelo lokushicilela © 2020 TurboMedia (turbomedia.io).
Le webhusayithi isebenzisa iicookies ukuqinisekisa ukuba ufumana amava amahle kwiwebhusayithi yethu